Cishe bonke abashayeli ukwazi ukuthi isimo lobuchwepheshe emotweni incike ngokuphelele ikhwalithi amafutha engine kanye igrisi ushintsho ngezikhawu. Ngokusho imiyalelo, njalo 7-10 km imoto iyalidinga. Vele wathenga umshini yaqaphela nge isikhungo pre-service Ugcwalise ngamafutha, okuyinto Kunconywa ngumkhiqizi kanye ekahle amandla iyunithi. Kulokhu, kusho omunye brand workshop washintsha ngaphandle pre-egeza, ngoba kunconywa ngumkhiqizi imoto akuyona sina. Leli cebo iyona engcono kakhulu ekulondolozweni "impilo" umshini. Kodwa umkhuba, konke kubukeka ezahlukene.
Ingabe uhlanganise uwoyela motor ne Ukucaciswa ezahlukene? Ungakwazi uhlanganise amafutha injini noma cha? Ukuthinta kanjani umsebenzi injini? Ngingaba uhlanganise amafutha abakhiqizi ezahlukene? imibuzo okuPhakade, okuyinto ziyaqhubeka izingxabano abashayeli.
Abanye bakholelwa ukuthi lokhu angeke kwenziwe ngokuqinile njengoba injini ukuwasha esiteji iyoqedwa khona ngokuphelele. Abanye siqinisekise ukuthi akonakele ndawo lapho, futhi ngeke kuphazamise ukusebenza injini.
Zombili izinhlangothi kwesokudla ngendlela yabo. Eqinisweni, amafutha kungenziwa exutshwe, kodwa ingqondo, sigcina imithetho ethile. Uma kungenjalo, kungenzeka ukulimaza motor, umphumela uyoba ulungiswe.
Ngingaba uhlanganise amafutha ezahlukene? Izizathu kuyo kuvunyelwe ukuba:
It ophoqelelwe isidingo uwoyela top-up.
Ukungabikho wayefisa umkhiqizo brand.
Ngingaba uhlanganise amafutha abakhiqizi ezahlukene? Yini ochwepheshe bacabanga ngale?
Kuhlangana kuvunyelwe kuphela amafutha esigabeni esifanayo. Okuwukuphela kwendlela yokugwema imiphumela emibi evela yangaphakathi omlilo engine.
Kuhlangana Kuvumeleke kuphela esimweni lapho umshayeli uhlose ungahambi eside.
The Ochwepheshe umkhakha kusho izakhamuzi ngazwi linye bathi kuphela izithasiselo zezinkinga ezingavela uma ukuxuba amafutha.
Iphuzu eliyinhloko kule nqubo Ukwakheka kwezitho ekhuthaza entsha zamakhemikhali, umphumela lapho akunakwenzeka ukubikezela.
Lapho ukuxuba amafutha abakhiqizi ezahlukene kufanele uqaphele ukuthi ngisho ne ukususwa olunzulu uwoyela noma iyiphi ingxenye izimayini uhlala. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka kwakwakhe ngayo amafutha fresh ngawo abanayo kwedivayisi ephelele. abashayeli amaningi esaba ukuthi ifomula enjalo akukucabangeli 100% umsebenzi motor.
Njengoba kushiwo ngenhla, uxhumano amafutha ezahlukene kungenzeka, kodwa kuncike ezicini ezithile, okumele luphathwe ngokunakekela ekhethekile kuphela. Ukuze ukubhekana imininingwane ndaba, kufanele wazi ukuthi hlobo luni amafutha ukuphi.
La mafutha esihlahla, ogxile amakhemikhali yokufakelwa.
simo esishubile ongaphakeme;
fluidity ezinhle ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi;
ongaphakeme viscosity ekuphenduleni lokushisa ekushintshashintsheni;
ukuzinza okusezingeni eliphezulu;
Kudinga izithasiselo kancane.
ingxenye yalo ebaluleke kakhulu iyona uwoyela. Abanye basibiza ngokuthi lolu hlobo of udaba eziphilayo.
Imvelo abanobungane - nenani amakhemikhali lincishisiwe.
izindleko Ebekelwe, ngezinye izikhathi iyisici kokunquma.
Ukutholakala. Itholakala kuwo wonke izitolo ephathekayo.
Igama ngokwalo lithi kuba inhlanganisela yalokhu okubili izinhlobo lokuqala amafutha.
eziphansi. Ngoba intengo kuba yesibili kuphela amafutha amaminerali.
Ihambisana nawo izimoto ukuthi ukusebenzisa kunoma iyiphi nophethiloli.
simo esishubile okuphansi.
It kuvimbela ukwakheka limescale.
inhlanganisela OKUVUMELEKILE amafutha:
lamanzi esiphethu nge-semi zokwenziwa. Uma injini iye yasetshenziswa nge mineral okugcotshwayo ke uhlanganise ne-semi zokwenziwa kuvumelekile. Futhi efanelekayo futhi wezinto zokwenziwa nge Pao. Futhi ngo uwoyela amaminerali angase iyangena zinhlobo ezilandelayo uwoyela: i-polyester, abicah, glycol. Kufanele kucatshangelwe ehilelekile ezifana kanjani ukwakheka amakhemikhali zokwenziwa umkhiqizo.
Zokwenziwa kwendingilizi yayo. Ngingaba uhlanganise uwoyela nezinye amafutha, esimweni zokwenziwa? Cishe bonke abakhiqizi lanamuhla bayatfutfuka amathuluzi ngokuhambisana yaseYurophu. Lokhu kubenza bakwazi uhlanganise. Kodwa lokhu akulona iqiniso lokuthi umphumela uzokhombisa ukuthi unalo igciwane. Kwezinye izimo, izinkinga ezilandelayo singenzeka: kwezulu, igwebu ukubukeka. Bamane zigcinwe zimbalwa uma siqhathanisa nabanye izinhlobo amafutha. Inombolo ubuncane nemiphumela ethile engathandeki uthi uthenge lomkhiqizo eliphezulu. Ngaphambi amafutha ukuxuba Kumele kuqashelwe ukuthi lokuqala kufanele ubambe uwoyela Kunconywa ngumkhiqizi, uhlelo pre-egeza.
Ukuxuba zokwenziwa kanye lulwimi zokwenziwa. Uma ngesikhathi kuwa ezingeni uwoyela emotweni niye nagcwaliswa nge zokwenziwa futhi iyatholakala yayimane nje semi zokwenziwa amafutha, ususindisiwe. Amathuluzi ezifana 5W40 futhi 10W40, ungakwazi mix ngokuphepha. Lokhu viscosity ngeke isukela kuze 6W40 8W40. Inhlanganisela kangcono lokhu kubhekwa amafutha akhona yekhwalithi ephezulu. Ngamanye amazwi, ingase semi zokwenziwa amafutha buhlanjululwe. Ukuxuba zokwenziwa semi zokwenziwa avunyelwe kuphela ezimweni wokuphuthuma.
Ukukhiqizwa abakhiqizi lezimpahla. Ngokusho kochwepheshe abaningi, uhlanganise uwoyela motor eyodwa brand kungaba. Lokhu kuyiqiniso, ngoba amafutha kamakhi efanayo azifane kakhulu ukwakheka kwamakhemikhali. Ngamanye amazwi, banayo base efanayo, kanye nokusungulwa yabo zamakhemikhali luyinto isethi ezifanayo kwezithako. Ngakho, ukuxutshwa amafutha eyodwa brand kwamukelekile ngempela. Ngaphezu kwalokho, abashayeli kumele uqaphele ukuthi ngezinye izikhathi zikhona izimo lapho uwoyela efanayo sithengiswa ngaphansi brand ezahlukene.
Amafutha ezivela abakhiqizi ezahlukene. Ngingaba uhlanganise amafutha abakhiqizi ezahlukene? Enye ingozi ongakhetha ukuxuba, ngoba akekho umuntu isiqinisekiso 100% ukusebenza ngokuqondene yokukhiqiza izinqubo ezahlukene. Kodwa lokhu akusho ukuthi umphumela uyoba negative esisodwa. Ngokuvamile waphawula ukuthi yesivini sakugcina kanye kwenze kwaba ukucasha lapho ngokuhlanganisa amafutha ezinjalo. Ngeshwa, lokhu kwenzeka kaningi impela.
Ukuxuba uwoyela 5W30 futhi 5W40
Amafutha 5W30 futhi 5W40 kungenziwa exutshwe. Ngokwesibonelo, uma endleleni kwenzakaleni ukwehla elibukhali ezingeni liquid akukho supply zokwenziwa 5W40, kodwa kukhona uketshezi efanayo ngamalebula ezifanayo futhi mshini, kodwa by abakhiqizi angaphandle, kuleso simo ungasiza 5W30 uwoyela umkhiqizi wakho. Lapho uphole up wathi uketshezi ukusebenza motor izinkinga motor ngeke luvuke. Kakhulu ukuthi kungenzeka - lena ukwehla okuncane viscosity. Lapho usebenzisa i-uketshezi multigrade noma 5W40 5W30 injini waqala at lokushisa 35. Waba yini umphumela walesi ukuxuba lokushisa izinguquko viscosity ezincane. Lo mphumela futhi akuxhomekile ngoba ohlangothini omubi kuzobonakala lapho injini isebenza ngaso eliphezulu kakhulu izinga lokushisa. Umshayeli ngeke nje ukugcina imoto kancane hhayi overload ke.
izincomo Jikelele yokuhlanganisa
Gcwalisa injini Kunconywa kuphela namafutha, okuyinto ekuqaleni igcwaliswe.
Endabeni kungenzeka usebenzisa lolu hlobo uketshezi kumele imikhiqizo ye-brand oyisebenzise.
Lapho kokuthenga amathuluzi, qaphela ukuthi okufanayo lezimpahla umkhiqizi ulakho ukukhipha uwoyela ngaphansi brand ezahlukene.
Ngingaba uhlanganise amafutha abakhiqizi ezahlukene uma eziphuthumayo? Ezimweni ezibucayi ezihilela ukusetshenziswa nezinye izinhlobo zemikhiqizo. Kuyadingeka ukunciphisa inani ukucindezeleka futhi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze alungise leso simo ngokufaka esikhundleni ke ngamafutha Kunconywa.
Tricks Trade yokudlulisela zokugcoba
Ungakwazi uhlanganise ukudluliswa amafutha noma cha, sihlolisise. Le nkinga kwenzeka kuphela esimweni lapho ukhuluma ngani lenjini yemoto thina. Kwenzeka akuvamile, kodwa kwenzeka uma kukhona ukwehla izinga igrisi ku PPC. Impendulo ulula: ukudluliswa uketshezi kungenziwa exutshwe, kodwa kuphela ngaphansi kwezimo licaciswe ku uwoyela motor. Kufanele kube okufanayo futhi kucishe ukubunjwa amakhemikhali. Le nhlanganisela ngeke avumele noma iluphi umshayeli ukushayela ngokuphepha umjikelezo obucayi amakhilomitha eziyizinkulungwane ezimbalwa kuphela. Ngemva kokuphela indlela kuyodingeka sokukhipha ketshezi bese ushintsha Kunconywa ngumkhiqizi.
It is nhlobo ukuxubanisa motor kanye igiya imikhiqizo. Ukuziba lesi siphakamiso kuzoholela ekulahlekeni injini ukusebenza. Ufunda kusuka ukuxuba ebulalayo.
Kunoma ikuphi kubalulekile ukubuyela uwoyela umenzi Kunconywa ukusebeza kahle injini ngemva ukuxuba amafutha. Ngaphambi kwalokho, udinga ukuba sifeze inqubo siwabeka ukuze siwasebenzise endlini injini:
Khama luhlobo yisikhathi. Nikeza ithuba ukushayela ukuma kancane ukuthi phakathi nalesi sikhathi amafutha ezihlangene esiphezulu. Uma kungenzeka, utshekisa imoto uphendulela zombili izinkomba. Ngakho inani loketshezi likhanyelwe ngaphezulu.
Fakela ukuhlunga okusha bese ugcwalisa ne Kunconywa uwoyela umkhiqizi.
Kwaphela izinsuku ezintathu kungavumi, zama ukungazivezi overload umshini ngenkathi injini ngeke ukujwayela uhlobo oluhlukile umkhiqizo.
Le nqubo elandelayo for ukushintshwa uwoyela kumele kwentiwe 10 th. Km.
Inqubo egeza Motor iphelile. Uma ukungabaza ekuhlanzekeni injini, phungula isikhathi inkonzo futhi unike imoto ukuya esiteshini inkonzo.
Cabangela izici izimoto ezivela abakhiqizi ezahlukene.
Amafutha Castrol laziwa abashayeli iziqu zabo eliphezulu ngokuthembeka futhi izinga. Iningi ngezimoto fast zisebenzisa amafutha sha.
Lapho eqhuba abashayeli umshini kufanele sikhumbule ukuthi isibalo esikhulu injini bafake kwenzeka ngenxa yethulwa. Amafutha Castrol Magnatec 5W-40 A3 / B4 kungaba awuvikele kakhulu kuqale run.
uwoyela Simple lapho injini esimweni sokungenzi lutho akusho uhlale ku-ke, lokho kuzoholela ekuvezeni izingxenye ebaluleke kakhulu amandla iyunithi. Amafutha Castrol Magnatec 5W-40 A3 / B4 ezisonga ucezu injini ngamunye, esehlanganise it nge ifilimu ezisindayo-duty lamafutha, okuyinto i ukuvikelwa okungeziwe ngesikhathi kuqalwa injini. Waba yini umphumela wesibindi ukusetshenziswa kuyinto ukunciphisa ingozi injini bafake.
Lapho esetshenziswa uwoyela Castrol Magnatec 5W-40 A3 / B4?
Car egijima ku uphethiloli kanye diesel.
Izinjini, okuyinto ngabakhiqizi balo ukusebenzisa lolu hlobo amafutha.
umboza futhi ibambezeleke injini nemininingwane emincane;
It yakha uwoyela ifilimu obukhulu, okuvumela motor ukunikeza ukuvikelwa ngowokuqala zokugcina ekuqaleni-up, ngaleyo ndlela kuncishiswe bafake yayo;
lapho kuhlangene zokwenziwa ubuchwepheshe ivikela motor ngaphansi ezahlukene lokushisa imibuso;
100% ukuvikelwa injini kokubheka imibandela yokusebenza izinhlobo ukushayela;
wathi izindlela brand demi;
asikwazi kwachuma kusukela umenzi wanakekela ukuzivikela.
Isici ehlukile iyona ukuvutha bohlu ultraviolet. Lesi senzakalo ivumela abakhiqizi kubathengi kalula ukuhlukanisa okoqobo kusuka mbumbulu.
"Lukoil Suite SN / CF 5W-40"
Wezinto zokwenziwa, vsesezonka. Libhekisela isigaba premium.
izimoto egijima ku-diesel;
likaphethiloli izinjini nge supercharging, okuyinto ukufakwa izimoto, ezimotweni namaloli.
uwoyela Domestic "Lukoil Suite SN / CF 5W-40" libhekisela zokwenziwa. Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa abashayeli kanye nezivivinyo, namuhla omunye zokugcoba okunokwethenjelwa kakhulu yayo isigaba intengo.
Kuyinto umkhiqizo Russian kubhaliswe ngokusemthethweni. Inikeza ukuvikelwa esiphezulu futhi elihlangabezana nazo zonke ezibekiweko kunesidingo.
It kuvimbela ukwakheka imali calcareous e uMbhalo kanye piston ngamazinga ashisa kakhulu;
It kuvimbela ukwakheka kodaka ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi;
It has a Kusizuzisa on uphawu;
amakhemikhali ukwakheka kwamafutha kusiza ukuphungula injini iqalwa izimo ezimbi kakhulu.
Ukwakheka ifilimu zokuzivikela ezingxenyeni ikhuthaza ukuvikela okukhulu phakathi motor uqalisa.
Pluses kusho "Lukoil Suite SN / CF 5W-40":
It kwehlisa khona umsindo;
Kuyinto the best injini Ukuvikelwa ngaphansi kwazo zonke izimo;
kuvimbela ukwakheka esisemanzini injini.
Amafutha "Lukoil Suite-API SL / CF 5W-30"
izicelo Main - izimoto ezithwala namaloli ukukhanya, okuyinto Kunconywa ukusetshenziswa ongaphakeme-viscosity zokugcoba. Zenzelwe izinjini "Ford" izimoto, "Renault". izici ezinhle efana uphawu odlule.
Ekuphetheni, kuyafaneleka ukuthi ukuthengwa motor zokugcoba kufanele kwenziwe eduduzayo esitolo onguchwepheshe, okuyinto ekuqaleni mfuneko yakho iyakwazi ukunikeza idokhumenti eqinisekisa izinga umkhiqizo. Futhi into enhle kakhulu ongayenza ukuthi ezitolo kaphethiloli. Ngoba izinga imikhiqizo, uthenge emakethe noma nje ngaleso lomgwaqo, wena nomuntu singenakwenzeka uzokuphendula.
Ngakho, sathola kungenzeka uhlanganise zokwenziwa amafutha. Sithemba lolu lwazi kuyoba usizo kuwe.
Kungani alternator ibhande kuzwakala: izimbangela futhi ukuqeda le nkinga
Okufanele ukwenze nge izimoto ezindala? uhlelo scrappage
Imoto ende kunazo zonke emhlabeni (izithombe)
Ingabe uyazi, ukuthi benza "Twister"?
Iyini isikhumba se-basal cell? Izinhlobo zamaseli ase-basal
Elena Shifrina: biography, imisebenzi, impilo yomuntu kanye namaqiniso athakazelisayo
Kanjani ukwenza cupping massage ekhaya?
Ilayisi "devzira": izinhlobo kanye izakhiwo ewusizo. Kuphi ukuze bathenge ilayisi "devzira"?